PS5 ga-abụ isiokwu kachasị sie ike nke GDC, mana Sony kagburu - BGR - TELES RELAY
PS5 ga-abụ isiokwu kachasị mma nke GDC, mana Sony kagburu
Na mbido afọ a, Sony kwupụtara na ọ ga-eleghara E3 maka afọ nke abụọ n'usoro. Ọ bụ ihe ijuanya, dịka E3 2020 dị ka ebe zuru oke iji gosi ọtụtụ egwuregwu vidio na-abịa n'ihu nye ndị na-ege ntị buru ibu, mana a tụrụ anya na Sony ga-eme ihe omume ya na February. Ugbu a na ọnwa Febụwarị agwụla, ọ bụghị naanị na anyị anụbeghị ihe ọ bụla sitere na Sony banyere ihe omume, mana ugbu a ụlọ ọrụ ahụ na-adọpụ na nnọkọ egwuregwu vidiyo egwuregwu niile bụ nke ga-eme n'oge opupu mmiri a n'ihi nchegbu mẹ ẹhu-eghu ẹphe ẹphe.
Wednesday Sony kwalitere otu edemede na blọọgụ ha iji kpọsaa na ọ gaghị eso na PAX East:
Taa, Sony Interactive Entertainment ekpebiela ịkagbu itinye aka na PAX East na Boston n'afọ a n'ihi nchegbu na-arịwanye elu metụtara COVID-19 (nke a makwaara dị ka "coronavirus ọhụrụ"). Anyị chere na ọ bụ nhọrọ kachasị nchebe, ebe ọnọdụ na-agbanwe kwa ụbọchị. Ọ na-ewute anyị ịkagbu anyị na ihe omume a, mana ahụike na nchekwa nke ndị ọrụ ụwa dum bụ nchegbu kachasị anyị.
Otu ụbọchị ka e mesịrị, Sony kwupụtara na ọ ga-ewepụkwa na Game Developers Conference (GDC). Nkwupụta nke Sony enyere GamesIndustry.biz bụ ihe yiri nke ahụ dị n'elu.
Ọ bụ ihe ọ bụla ma echeghị na Sony ga-ekpughere egwuregwu PlayStation 5 niile na mmemme ụlọ ọrụ, mana enwere olileanya na ka ọ na-erule oge GDC bupụrụ, Sony ga-enwe opekata mpe karịa ikwu maka atụmatụ ya. maka ọgbọ ọzọ. N'ezie, n'ime GDC Kwa Afọ State nke Nchọpụta Mmepụta, nke a na-eduzi n'izu ndị na-eduga ihe omume ahụ, 38% nke ndị mmepe kwuru na ha nwere mmasị karịsịa n'ịzụlite egwuregwu maka PS5 dị nso 37% maka ndị Switch na 25% maka Xbox Series X (n'agbanyeghị PC nwere merie ala 50% mbuze).
O bu ihe nwute diri ndi mmepe na ndi choputara, odi ka odi ka enwere ohere imuta ihe ohuru na PS5 na GDC 2020 agbadatala na efu. Anyị na-atụ anya na Sony ga-enwe opekata mpe vidiyo vidiyo kacha opekata mpe n'ọrụ ahụ.
Isi iyi nke onyonyo: Jomic / Shutterstock
Brainbụrụ mmadụ jidere na akwụkwọ nyocha
Zụ ahịa na Amazon chekwaa $ 50 na mgbanaka Doorbell, yana Get nweta Echo Point Free - BGR